Dowlada Canada iyo dowlada Ingiriiska ayaa baroor-diiq u sameeyay dadkii qaraxa ku waxyeeloobay, sawiro – Mogadishutimes
Kulan loogu baroor-diiqayay qaraxii naxdinta lahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho Octobar 14, ayaa lagu qabtay xarunta wasaarada arimaha dibada ee Canada. Waxaa soo wada qaban qaabiyay wasaarada arimaha dibada ee Canada iyo madaxa dowlada Ingiriiska ee Canada.
Mar dhaw ayaa baroor-diiqdan oo kale laga sameeyay barlamaanka Canada. Qaraxii Muqdisho ka dhacay ayaa lagu tilmaamay in uu ahaa kii ugu qasaaraha badnaa dunida ee meel qura ka dhaca. Waxaa ku dhintay dad kor u dhaafaya 350, halka tiro intaa ka badana ay ku dhaawacmeen.
Waxaa goobta ka hadlay Ms. Diane Jacovella oo ah Deputy Minister of International Development ee Canada iyo Mrs. Susan Le Jeune d’Allegeershecque CMG oo ah British High Commissioner to Canada. Waxay muujiyeen sida ay uga xumaadeen dhacdadii qaraxa. Waxay kaloo tilmaameen in ay caawinayaan garabna ka siin doonaan sidii ay Soomaaliya lugaheeda ugu istaagi lahayd.
Dowlada Canada ayaa qorsheyneysa in ay caawiso Soomaaliya. Wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga mudane Jamal Maxamed Xasan oo dhawaan booqasho ku yimid wadanka Canada ayaa dowlada Canada kala hadlay in ay taageeraan dib u dhiska Soomaaliya.
Farhia Ahmed oo goobta baroor-diiqda ka hadashay ayaa tilmaantay sida ay Soomaalida uga naxeen qaraxii muqdisho ka dhacay. Waxay sheegtay in Soomaalida meel walba oo ay joogeen ay iloobeen wixii ay isku haysteen.
Dowlado badan ayaa lacago bixiyay. Marka laga reebo dowlada Turkiga, Soomaalida waxay noqdeen kuwii ugu badnaa ee bixiya lacagihii loo yaboohay dadkii qaraxa wax ku noqday.